ဒူဒူကြီး: ‘VFD - Variable frequency drive (၂)'
AC line power ဖြင့် fixed speed motor load applications တွေကို တိုက်ရိုက်သုံးစွဲမယ့်အစား၊ VFD မှတဆင့် variable - speed အဖြစ်၊ အသုံးပြခြင်းဖြင့် energy saving အနေနဲ့ စွမ်းအင် ချွေတာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ VFD အသုံးပြုထာတဲ့ variable torque centrifugal blower fan တွေနဲ့ pump applications တွေမှာ၊ load torque နဲ့ speed ဟာ square ဆိုတဲ့ နှစ်ထပ်ကိန်းဖြင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျပြီး၊ power နဲ့ speed ကတော့ သုံးထပ်ကိန်းနဲ့ တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် load torque တဆမှာ speed နှစ်ဆဖြင့် လည်ပတ်နိုင်ပြီး၊ power consumption တဆမှာ speed သုံးဆရရှိနိုင်တယ်လို့၊ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ motor ဟာ (၆၃ %) speed ဖြင့် load ထမ်းကာလည်ပတ်စဉ်၊ full speed power ရဲ့ (၂၅ %) သာ၊ သုံးစွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ခေါါတ်ကာလမှာ VFD အသုံးပြုထားတဲ့ AC drives တွေကို၊ industrial နဲ့ commercial applications ကဏ္ဍမှ၊ acceleration, flow, monitoring, pressure, speed, temperature, tension နဲ့ torque တို့အတွက်၊ အစားထိုးသုံးစွဲလာကြပါတယ်။ fixed speed operated load motor တွေဟာ၊ မြင့်မားတဲ့ high starting torque ဖြင့်စတင် လည်ပတ်ပြီး၊ full-load current ရဲ့ (၈) ဆခန့် ရှိတဲ့ current surges ကိုဖြစ်ပေါါစေပါတယ်။ AC drives တွေမှာတော့ operating speed ကို၊ 'ramp up' အနေနဲ့ တဖြည်းဖြည်း မြှင့်တင်ယူသွားတဲ့အတွက်၊ mechanical နဲ့ electrical stress တွေလျှော့နည်းသွားသလို၊ maintenance နဲ့ repair costs ကုန်ကျမှုတွေကိုပါ၊ သက်သာကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။
Fig. compares AC and DC drives according to certain key parameters
DC နဲ့ AC drives တွေကို၊ low speed ဖြင့်၊ four quadrant operation with regeneration, frequent acceleration and deceleration routines အစရှိတဲ့ continuous operation အနေနဲ့၊ hazardous area တွေမှာ လိုအပ်သလိုမောင်းနှင်တဲ့အခါ၊ ရရှိလာမယ့် performance factors တွေအား၊ အပေါါပုံမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ AC drives တွေကို၊ VSI ဆိုတဲ့ voltage source inverter drive, CSI ဆိုတဲ့ current source inverter drive, six-step inverter drive, LCI ဆိုတဲ့ load commutated inverter drive, MC ဆိုတဲ့ cycloconverter or matrix converter နဲ့ doubly fed slip recovery system ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားထားပါတယ်။
Fig. VSI and CSI
VSI and CSI - VSI drive မှာ၊ diode bridge converter မှ DC output ကို၊ capacitor bus မှာ stores ပြုလုပ်ပြီး၊ stiff voltage input အဖြစ် inverter သို့ပေးသွင်းပါတယ်။ VSI type ရဲ့ output ဟာ PWM voltage output ဖြစ်ပါတယ်။ CSI drive မှာတော့ SCR bridge converter မှ DC output ကို၊ series reactor bus မှာ stores ပြုလုပ်ပြီး၊ stiff voltage input အဖြစ် inverter သို့ပေးသွင်းပါတယ်။ CSI type ရဲ့ output ဟာ PWM voltage output ဖြစ်နိုင်သလို၊ six step waveform output လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Fig. Six-step drive waveforms
Six step inverter drive - ယခုအခါ six step inverter drive တွေရယ်လို့ obsolete အနေနဲ့ သုံးနှုံးမှုမရှိတော့ပဲ၊ variable voltage inverter drives, PAM ဆိုတဲ့ pulse amplitude modulation drives, square wave drives နဲ့ D.C chopper inverter drives လို့သာ၊ ခေါါဝေါါကြတာတွေ့ရပါတယ်။ SCR bridge converter မှ DC output ကို၊ capacitor bus နဲ့ series reactor bus တို့မှာ smoothed ဖြစ်စေပြီး၊ 'darlington pair' သို့မဟုတ် IGBT ဆိုတဲ့ inverter quasi - sinusoidal တို့မှတဆင့်၊ six step voltage/ current input အဖြစ် induction motor သို့ ပေးသွင်းပါတယ်။
Fig. (a) PAM - pulse - amplitude modulation and (b) Square waveform with fundamental sine wave component
'PAM' ဟာ signal modulation တွေဖြစ်ပြီး၊ single polarity PAM နဲ့ double polarity PAM ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ single polarity PAM ရဲ့ pulses တွေဟာ၊ positive signal တွေ ဖြစ်ပြီး၊ double polarity PAM ရဲ့ pulse တွေကတော့ positive နဲ့ negative signal တွေဖြစ်ပါတယ်။ 'square wave drives' ဟာ electrical power converter ဖြစ်ပြီး၊ direct current (DC) ကို၊ alternating current (AC) အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။
Fig. Schematic of an inverter usingavibrator asachopper
'chopper' ဆိုတာကတော့ electronic switching device တခုဖြစ်ပြီး အခြား device တခုအား၊ control လုပ်ရန်အတွက်၊ interrupt signal ထုတ်ပေးပါတယ်။ chopper တွေကို On basis of I/P - O/p voltage levels chopper, On basis of direction of output voltage and current chopper, On basis of circuit operation chopper နဲ့ On basis of commutation method chopper ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
step down chopper နဲ့ step-up chopper တို့ဟာ၊ 'On basis of I/P - O/p voltage levels chopper' တွေဖြစ်ကြပြီး၊ 'On basis of direction of output voltage and current chopper' တွေကိုတော့ Class A, Class B, Class C, Class D နဲ့ Class E chopper ဆိုပြီး၊ ထပ်မံခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ အလားတူ' On basis of circuit operation chopper' တွေ ကိုလည်း၊ first quardant, two quardant နဲ့ four quardant chopper ဆိုပြီး၊ ထပ်မံခွဲခြားထားသလို၊ 'On basis of commutation method chopper' တွေကိုတော့ voltage commutated, current commutated, load commutated နဲ့ impulse commutated chopper ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ chopper တွေကို modern uses အနေနဲ့ DC to DC converters တွေအပါအဝင် switched mode power supplies, DC motors speed controllers, Class D electronic amplifiers, switched capacitor filters နဲ့ variable frequency drive အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။
Fig. Darlington pair and IGBT - insulated - gate bipolar transistor
'darlington pair' ကို 'darlington transistor' လို့လည်းခေါါကြပြီး bipolar transistors (၂) လုံးကို separated devices သို့မဟုတ် integrated အနေနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ compound structure ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမ first transistor ဟာ၊ current ကို amplified အနေနဲ့ ချဲ့ထွင်ပေးပြီး၊ ဒုတိယ second transistor မှ ဆက်တိုက် amplified လုပ်ခြင်းဖြင့်၊ မြင့်မားတဲ့ higher common/ emitter current gain ရရှိလာပါတယ်။ darlington pair ဟာ အမျိုးအစားတူညီတဲ့ transistor (၂) လုံးဖြင့် shared collector တခုတည်းကို၊ သုံးထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ NPN နဲ့ PNP transistors (၂) လုံးသုံးထားတဲ့ complementary Darlington တနည်းအားဖြင့် 'sziklai pair' နဲ့ မတူညီတာ၊ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
darlington pair ဟာ sensitive ဖြစ်လွန်းတဲ့ semiconductor device ဖြစ်ပြီး၊ safe voltages အခြေအနေမှာ၊ လူ့အရေပြားနဲ့ထိရုံ skin contact ဖြင့် current passed အနေနဲ့ ဖြတ်စီးနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ darlington pair ရဲ့ အားနည်းချက် disadvantages ကတော့ 'drawbacks' တွေပေါါပေါက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ 'drawback' ဟာ base/ emitter voltage ရဲ့ (၂) ဆခန့်ရှိတဲ့ ပမာဏဖြင့်ပေါါပေါက်နိုင်သလို increased saturation voltage မြင့်မားမှုအနေနဲ့လည်း၊ ပေါါပေါက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် switching speed လို့ခေါါတဲ့ response ဟာ၊ reduction အနေနဲ့ လျှော့နည်းကျဆင်းသွားတဲ့ drawback လည်း၊ ဖြစ်ပေါါနိုင်ပါတယ်။
Fig. (a) - IGBT-Module (IGBTs and freewheeling diodes) witharated current of 1,200 A andamaximum voltage of 3,300 V, (b) - Opened IGBT module with four IGBTs (half of H-bridge) rated for 400 A 600 V, (c) - Small IGBT module, rated up to 30 A, up to 900 V.
'IGBT' ဆိုတဲ့ 'insulated gate bipolar transistor' ဆိုတာကတော့ three-terminal power semiconductor device ဖြစ်ပြီး၊ high efficiency နဲ့ fast switching response အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွက်၊ VFD တွေမှာ ပိုမိုအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် switching amplifiers အဖြစ်၊ electric cars, trains, variable speed refrigerators နဲ့ air conditioners တွေအပြင်၊ medium နဲ့ high-power applications တွေဖြစ်တဲ့၊ switched-mode power supplies traction motor control နဲ့ induction heating တွေမှာလည်း၊ အသုံးပြုကြပါတယ်။ IGBT တွေဟာ simple gate-drive characteristics ဂုဏ်သတ္တိရှိတဲ့ 'MOSFET' နဲ့ low - saturation voltage capability အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ 'bipolar transistor' တို့ကို၊ ပေါင်းစပ်ကာ၊ 'isolated gate FET single device' အဖြစ်အသုံးပြုခြင်းရယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Fig. Cross section ofatypical IGBT showing internal connection of MOSFET and Bipolar Device
IGBT cell ရဲ့တည်ဆောက်ပုံဟာ၊ n-channel vertical construction power MOSFET ရဲ့ တည်ဆောက်ပုံနဲ့ ဆင်တူပြီး၊ MOSFET ရဲ့ 'n+ drain' နေရာမှာ၊ 'p+ collector layer' ကို အစားထိုးထည့်သွင်းကာ၊ vertical PNP bipolar junction transistor ကဲ့သို့၊ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ p+ collector layer ရဲ့ 'p+ region' ဟာ PNP bipolar junction transistor နဲ့ n-channel MOSFET ရဲ့ surface တို့ကို၊ cascade connection အနေနဲ့ ဆက်သွယ်ပေးထားပါတယ်။
Load commutated inverter drive (LCI) - ကတော့ CSI ကို၊ မွန်းမံထုတ်လုပ်ထားတဲ့ drive ဖြစ်ပါတယ်။ CSI ကဲ့သို့ SCR-bridge converter မှ DC output ကို၊ DC link inductor circuit မှာ stores ပြုလုပ်ပြီး၊ ဒုတိယ SCR-bridge's inverter မှာထပ်မံဖြတ်သန်းပြီးမှ၊ stiff quasi-sinusoidal six step current output အနေနဲ့ synchronous machine သို့ပေးသွင်းပါတယ်။
Cycloconverter or matrix converter (MC) - ကြားခံ intermediate အဖြစ် energy storage ပြုလုပ်ပေးမယ့် DC link တွေမပါဝင်ပဲ၊ AC - AC converters တွေအဖြစ်၊ တည်ဆောက် ထားပါတယ်။ AC - AC converters တွေကို indirect AC - AC လို့ခေါါတဲ့ AC - DC - AC converters, CCV ဆိုတဲ့ cycloconverters, hybrid matrix converters နဲ့ MC ဆိုတဲ့ matrix converters တွေအဖြစ်၊ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
Fig. blocking mode type cycloconverter
'CCV' လို့ခေါါတဲ့ 'cycloconverter' တွေကို၊ 'cycloinverter' လို့လည်းခေါါကြပါတယ်။ 'CCV' တွေဟာ AC supply မှရရှိလာတဲ့ constant voltage, constant frequency AC waveform ကို၊ intermediate DC link အသုံးမပြုပဲ နောက်ထပ် lower frequency AC waveform အဖြစ်၊ ပြောင်းလဲကာ synthesizing output အနေနဲ့ ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။ CCV တွေကို circulating current type နဲ့ blocking mode type အဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပြီး၊ high power applications တွေမှာ blocking mode type CCV တွေကို၊ တတ်ဆင်အသုံးပြုပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် CCV တွေမှာ၊ phase-controlled SCR switching devices တွေကို အသုံးပြုထားပြီး၊ resistive load applications တွေမှာတော့ ဈေးနှုံးသက်သာတဲ့ low-power TRIAC - based CCV တွေကို၊ အသုံးပြုပါတယ်။
Fig. Typical output voltage waveform for one phase of six-pulse cycloconverter supplying an inductive (motor) load.
CCV တွေကို 1 - phase/ 1 - phase,3- phase/ 1 - phase နဲ့3- phase/ 3-phase input/ output configuration တွေဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီး၊3- phase/3- phase input/ output configuration ကို၊ အသုံးများပါတယ်။ three-phase CCV တွေရဲ့ output to input frequency ratio ဟာ circulating current mode CCV ထက် သုံးပုံတပုံလောက်သာ ရှိပြီး၊ blocking mode CCV ထက် တဝက်ခန့်သာရှိတာ၊ တွေ့ရပါတယ်။ CCV ရဲ့ input မှ switching-device bridges တွေကို၊ phase-shifted configuration ပုံစံဖြင့် တတ်ဆင်ထားပြီး၊ switching-device bridges အရည်အတွက်များစွာတတ်ဆင်ခြင်းဖြင့် output waveform quality လည်းမြင်းမားလာနိုင်ပါတယ်။
phase-controlled converters တွေဖြစ်တဲ့ CCV တွေနေရာမှာ၊ IGBT, GTO, IGCT နဲ့ အခြားသော switching devices တွေကို၊ အခြေခံတည်ဆောက်ထားတဲ့ faster PWM self-controlled converters တွေအစားထိုး နေရာယူလာတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် higher end of the power rating range application တွေဖြစ်တဲ့ driving rolling mine hoists, mill main motors, ore processing, cement kilns တွေနဲ့ သဘေ်ာတွေရဲ့ propulsion systems တွေမှာတော့၊ CCV တွေကို တတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။
Fig. Schematic Diagram ofaCycloconverter - based Propulsion System
သဘေ်ာတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ cycloconverter တွေကတော့၊ three-phase current source ကိုအသုံးပြုပြီး၊ three anti-parallel connected SCR - bridges တွေမှတဆင့်၊ six-pulse configuration output ထုတ်ပေးပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် cycloconverter phase တခုစီကို fixed line frequency AC voltage အဖြစ်ရွေးချယ်ပြီး၊ variable load frequency AC voltage သို့၊ ပြောင်းလဲပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Fig. (a) conventional direct matrix converter and (b) indirect matrix converter
Fig. direct matrix converter type VFD
'matrix converter' တွေကို၊ conventional direct matrix converter နဲ့ indirect matrix converter ဆိုပြီး၊ တွေ့ရပါတယ်။ indirect matrix converter တွေကို၊ indirect energy conversion အနေနဲ့ အသုံးပြုပြီး၊ sparse matrix converter လို့လည်းခေါါပါတယ်။ DC - link based VSI နဲ့ CSI drives တွေ တနည်းအားဖြင့် IGBT - based ကို၊ အခြေခံပြီးတည်ဆောက်ထားတဲ့ matrix converter တွေဟာ၊ separate stages တွေမှတဆင့် voltage နဲ့ current conversion တွေကို၊ လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
Reference and image credit to : Bartos, Frank J. (Sep. 1, 2004). "AC Drives Stay Vital for the 21st Century". Control Engineering (Reed Business Information)., Cleaveland, Peter (Nov. 1, 2007). "AC Adjustable Speed Drives". Control Engineering (Reed Business Information)., "Energy Regeneration". Retrieved Apr. 20, 2012., Basics of AC Drives, pp. Hardware - Part 1: slides 9-10 of 11., Bose, Bimal K. (2006). Power Electronics and Motor Drives : Advances and Trends. Amsterdam: Academic. p. 22. ISBN 978-0-12-088405-6., Bartos, Frank J. (Sep. 1, 2004). "AC Drives Stay Vital for the 21st Century". Control Engineering (Reed Business Information)., Eisenbrown, Robert E. (May 18, 2008). "AC Drives, Historical and Future Perspective of Innovation and Growth". Keynote Presentation for the 25th Anniversary of The Wisconsin Electric Machines and Power Electronics Consortium (WEMPEC). University of Wisconsin, Madison, WI, USA: WEMPEC. pp. 6–10., Horowitz, Paul; Winfield Hill (1989). The Art of Electronics. Cambridge University Press. ISBN 0-521-37095-7., Bose, Bimal K. (2006). Power Electronics and Motor Drives : Advances and Trends. Amsterdam: Academic. p. 126. ISBN 978-0-12-088405-6.
Posted by ကိုထွန်း at 18:44